Saika haterina any amin’ny banky… : lasan’ny jiolahy teny ambony moto ny vola 20 tapitrisa Ar | NewsMada
Saika haterina any amin’ny banky… : lasan’ny jiolahy teny ambony moto ny vola 20 tapitrisa Ar
Voaroban’ny jiolahy roa nitondra basy nandeha moto Cross teny amin’ny rond point Ankazomanga, omaly tamin’ny 12 ora antoandro, ny lehilahy iray nitondra vola 20 tapitrisa Ar saika haterina any amin’ny banky…
Vola 20 tapitrisa Ar nokasaina harotsaka any amin’ny banky ity lasan’ny jiolahy tao anatin’ny minitra fohy ity. Nandeha moto ity lehilahy ity ary nobabena tamin’ny sakaosy ilay vola. Efa narahin’ireo jiolahy avy aoriana amin’iny lalana mihazo an’Ankazomanga iny izy ka teo amin’ny rond point Ankazomanga no nanatanterahan-dry zalahy ny fanafihana. Nohitsin’ireo olon-dratsy ilay moto ka mody nodonina avy aoriana sady nanendaka ilay sakaosy nisy vola ry zalahy. Araka ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray nahita ny fitrangan’ny fanafihana, notrongisin’ilay moto avy aoriana ilay lehilahy nitondra vola tamin’ny sakaosy sady nendahin’izy ireo. Samy tsy nisy nanampo na inona na inona mihitsy ny olona tety amin’ny manodidina hoe jiolahy manendaka ireto nifandona tamin’ity lehilahy nitondra moto ity. Nianjera ilay moto, lasan’ireo jiolahy ny vola.
Raha ny fanazavan’ilay lehilahy niharan’ny fanafihana kosa, saika hisongona azy ireo olon-dratsy sady nisintona ny sakaosy teny aminy. “Voarain’ny jiolahy iray tamin’ny vozon’akanjo aho ka nianjera avy hatrany”, raha ny filazany. “Nalain’izy ireo ny vola ary tsy afaka nanao na inona na inona intsony”, hoy izy nitantara ny zava-nitranga teny an-toerana.
Tafaporitsaka ireo olon-dratsy…
Raikitra ny fifanjevoana satria ny jiolahy iray nisintona ny vozon’akanjon’ilay lehilahy nitondra ny vola. Ny iray nitondra moto kosa nampitahotra sady nandrahona azy mba hanome ilay sakaosy misy vola. Latsaka nandritra ny fifanjevoana ny basin’ireo olon-dratsy, saingy tafaporitsaka ihany ry zalahy rehefa nahazo ny vola, araka ny fitantaran’ilay lehilahy voaendaka. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny Ankazomanga ny fiara 4×4-n’ny polisy, saingy tsy nisy azo natao intsony fa efa tsy hita izay nanjavonan’ireo jiolahy nitondra ny vola. Na izany aza, niezaka nanenjika ireo olon-dratsy hatrany ny polisy.
Manahy ireo olona teo amin’ny manodidina ny toerana nitrangan’ny fanafihana fa fantatr’ireo olon-dratsy ny fisian’ny volabe entin’ity lehilahy ity ka narahin’izy ireo avy aoriana.
Tsy nisy poa-basy rahateo nandritra izany, araka ny fanazavan’ireo nahita ny fitrangan’ny fanafihana teny Ankazomanga.
Aoka ho mailo hatrany rehefa mitondra vola haterina any amin’ny banky toy izao. Ny ratsy tsy kely lalana ary ny patsa iray tsy omby vava, araka, ny fitenenana; rehefa tonga tampoka tsy ampoizina.